450 Mhz handset ၀ယ်ယူမည် ဆိုလျှင် …….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » 450 Mhz handset ၀ယ်ယူမည် ဆိုလျှင် ……..
450 Mhz handset ၀ယ်ယူမည် ဆိုလျှင် ……..
Posted by Mobile House on Aug 3, 2011 in Computers & Technology, Myanma News | 20 comments
450 Mhz handset ၀ယ်ယူမည် ဆိုလျှင် ........
450 Mhz handset ၀ယ်ယူမည် ဆို မိမိ သုံးမည့်ဒေသပေါ် မူတည်ပြီး ၀ယ်ယူ သင့်တယ် ။နယ်ဝေး ဆို လိုင်းကိုဦးစားပေးသော handset ၀ယ်ယူသင့် ။ N 160 , ZTE 168 ,CE210 တို့ကလိုင်းကောင်းပြီး အပျက်နည်းတယ်။function နည်းနည်း ပါ ပြီး လိုင်းကောင်း တာ က တော့ မျာသောအားဖြင့် bluetooth ပဲ မပါတာပါ ။ Nico တိုင် ပါ ပြီး အတို အရှည်အလွယ်တကူချိန်းနိုင်တယ် ၊ battery ၂ ရက် အ သုံး ခံတယ်။D lan တို့ Sony Ericsson တို့ ရှိသေးတယ်။တရုတ်က ၀င် တာ ပဲ။Anydata နံမည် နဲ့ ၀င် တဲ့အမျိုးအစားတော့မကောင်း ဘူး ။ဈေးတော့ပေါတယ်။function အစုံပါတယ်။ဒါပေမယ့်လုံးဝ မကောင်းဘူး ။function စုံတဲ့ဖုန်းတွေက လိုင်းဆွဲအားနဲတယ်။800 mhz နဲ့ 450 mhz တွဲ တဲ့ ဟာ က တော့ဆော့ဝဲကြောင် တယ်။၄၅၀ mhz တွေက battery စားတယ် ။လိုင်း က battery နဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့ ဖုန်းပြော ရင် ပိုစားတယ် ။လိုင်းမိတဲ့နေရာမှာဖုန်ထားကြပါ။မဟုတ်ရင် network IC လောင်နိုင်တယ်။
မေးချင်တာရှိရင် Gmail – yeyintaung777 @gmail.com
ph-0991022443 , 011203119 , 0949239384 မှာမေးနိုင် ပါ တယ်။
Mobile House in Mandalay
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရင်က နေပြည်တော်ဆိုလို့ နေပြည်တော်ဖုန်းဝယ်ကိုင်ခဲ့သေးတယ်။450 မှာ အစုံသုံးလို့ မရတော့ handset ကောင်းကောင်းကိုင်မရဘူးလေ။ခုတော့ 800MHz ဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ကမ်းရိုးတန်းဒေသပေမယ့် handset လဲသုံးနေရတဲ့ roaming စနစ်ကိုမကြိုက်ပါဘူး
800 Mhz က huawei handset က လွဲ ပြီး တခြား handset တွေ က တခြား မြို့ ယူသွားလိုမရဘူး ။huawei မှာ code number ချိန်းလို့ရတယ်။၈၀၀ mhz က လိုင်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။အပျက်လဲနည်းတယ်။
ဟုတ်လား နယ်ပါ ကုတ်ပြောင်းယုံနဲ့ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာ … ။ ကုတ်က ဘယ်လိုပြောင်းရတာလဲ … ပြောပါဦး … ။
800MHz မှာ huawei ကထုတ်လို့ အသုံးများတာ … C5900 နဲ့ C8600 တွေပါပဲ .. ။
ူC5900 နဲ့ အင်တာနက်သုံးရင်း temp data တွေများလို့ ဖျက်မယ်ဆိုတော့ … ဖုန်းကုတ်တောင်းတယ် … ဟိုတခါ မေးလ်မှာပါတဲ့အတိုင်း ဖုန်းကုဒ်ရှာလို့ တွေ့တော့.. ရိုက်ထည့်တာ .. အဲ့ဒီနံပါတ်လည်း မဟုတ်ဘူးတဲ့ .. ရူးချင်တယ် … ။ ဒေတာတွေ format ချမလို့တောင် စိတ်ကူးမိသေးတယ် … ။
ကုဒ်ချီိန်း ရင် 450 mhz ကွန်ရက် မှာ သုံး ရတာ မဟုတ်ပါဘူး ။450 mhz UIM card တွေဖတ်အောင်လုပ်တာ ပါ ။မဟုတ်ရင် 49,47,68,65 … စတာ တွေမဖတ်ပါဘူး ။ကုဒ်ချိန်း မကဒ် ကို ဖတ်တာ ပါ ။800 mhz ကွန်ရက် မှာပဲ သုံးလို့ရမှာပါ ။
user code ဆို ၀၀၀၀ ။၀၀၀၀ ။၁၂၃၄ ။၁၂၃၄၅ ။၁၁၂၂ ။၁၂၁၂ ။စမ်း ကြည့်လိုက်ပါ ။
ဟုတ်ပါတယ်။ရှင်းပြပေးတော့သိပ်ကျေးဇူးတင်တာဘဲနော်။. ကမ်းရိုးတန်းမှာ က 450 ကိုဘယ်ဖုန်းမှမမှီဘူးနော် ။အဲတော့ ခဏခဏ ဖုန်းလဲထည့်ရတာအဆင်မပြေသေးပါဘူး။450MHz မှာ handset အမြင့်လာမယ်ဆိုရင် ကောင်းမှာပါ။ ZTE P21 တို့ ကျတော့လဲ ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့ ပြန်ရတဲ့ performance ကသိပ်ကွာလွန်းပါတယ်။ P21 ရဲ့ function တွေက သာမန် GSM Handset လေးငါးသောင်းအဆင့်ဘဲရှိနေတာ ပေးတဲ့ငွေနဲ့ မတန်ဘူးလားလို့ ပါ
450MHz ကမ်းရိုးတန်းဖုန်းမှာ Huawei ကိုသုံးကြည့်ပါ။ သုံးရတာတန်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ မေလ ကုန်မှာဝယ်ကိုင်ခဲ့တာ အခုထိ သုံးကောင်းတုန်း။ ဘက်ထရီက (၃)ရက်ထိခံတယ်။ အခုမှ ဘက်ထရီ လဲလိုက်ရတယ်။ နောက်ဝယ်တဲ့ ဘက်ထရီက မူရင်းဘက်ထရီလောက် မကောင်းဘူး။ (၂) ရက်ကျော်ကျော်ဘဲ ရတော့တယ်။ ဖုန်းကတော့ (၃) နှစ်ကျော်ပြီ။ သုံးလို့ ကောင်းတယ်။ လိုင်းဆွဲအား ကောင်းတယ်။ သုံးရတာ တန်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ၇၃၀ နဲ့ စတဲ့ ဖုန်းအတွက် ဖုန်းတွေက ဘာ အမျိုး အစား ကောင်းပါသလဲ နောက်ပြီး ဘယ်ဈေးလောက်ရှိပါသလဲ မျှဝေပါအုန်း။
450 နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့Unimile PR600 ကတော့ မကောင်းပါဘူး … battery က ပုံမှန် သုံးရင် ၆နာရီ လောက်သုံးရပြီး ဒီ အတိုင်းထားရင် ၁၂ လောက် ပဲခံတယ်။spare part တွေက ရှားတယ် ။လိုင်း ဆွဲအား က အခန်းထဲရောက် ရင် မမိတော့ဘူး ။ဈေး ကလဲမတန်ဘူး။ U 900 က တော့ တော်တော် လှတယ်။ဒါပေမဲ့ battery အားစား တယ် ။သုံးမယ်ဆို ၄နာရီ လောက်ပဲရ တယ် ။ဈေတော့ ချို တယ် ။၄၀၀၀၀ ကျပ်လောက် ပဲရှိတာ။ လိုင်းအတွက်ဆို ZTE N160 ကောင်းတယ် ။အပျက်နည်းတယ်။ Function တော့မပါဘူး ။Nico ကတော့ Bluetooth မပါဘူး ။ဒါပေမဲ့ လိုင်းမဆိုးဘူး ။camera 2.0 ၊ Memory card စိုက်လို့ရပါတယ်။ Battery2ရက်ခံတယ်။၆၅၀၀၀ကျပ် ပါ။ ဘယ်မျာ သုံးမှာလဲ ပေါ်မူတည် တယ်။၈၀၀ Mhz ရှိ တဲ့ မြို့ဆို Huawei 5600 ,5700,5710,5720,5730,5900… ! 5600 and 5900 ကတော့ Function စုံတယ်။ကျန်တာ ကတော့ Bluetooth ပဲမပါတာ။Battery ၃ရက်ခံတယ် ။အပျက်နည်းတယ်။ဈေးက ၆၅၀၀၀ နား မှာပဲ။Ic ပျက်ရင် ပြင်မရဘူး။Code change ပြီးသုံးရင် ၄၅၀ Card လဲ သုံးလို့ရတယ်။၈၀၀ Mhz မိ တဲ့မြို့တွေအကုန် သုံးရပါတယ်။
450 အတွက် Haier တံဆိပ် သုံးဖြစ်ပါတယ်။ တံဆိပ်ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေတော့
သိပ်မသိပါဘူး။ဈေးနှုန်းလည်း သင့်တင့်ပြီး လိုင်းဆွဲအားကောင်းတယ်ဆိုလို့ သုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ထရီကတော့ ဖုန်းသိပ်မပြောဘူးဆိုရင် တစ်ပတ်မှာ နှစ်ခါလောက်သွင်းရင်ရပါတယ်။
450 ကပြောတာ ကြာရင် ဖုန်းက ပူလာပါတယ်။ နယ်မှာဆိုရင်တော့ 450 လိုင်းက
အကောင်းဆုံးပါပဲ။ GSM လိုင်း မမိတဲ့နေရာတွေမှာပါ သုံးလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
haier က တော့ မဆိုးပါဘူး ။သင့်ပါတယ် ။CPU ကော software ကော ရပြီ ဆိုတော့ ပျက်ရင်ပြင်လို့ လွယ်ပါတယ် ။လိုင်းလည်းသင့် ပါတယ် ။အရမ်းအကောင်းတော့ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မမေးချင်တာက Hauwei ဖုန်းမှာ ကုဒ်ခချိန်းရင် 450 ကွန်ရက်မှာသုံးလို့ ရတယ်ဆိုတော့ သူ့ ထဲကိုတခါတည်း 450 UIM card ထည့်သုံးလို့ ရမရ သိချင်လို့ ပါ။ဖြေကြည့်ပေးပါနော်
450 နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့Unimile PR600 ကတော့ တော်တော်ကေင်းပါတယ် … battery ကိုလဲ နှစ်ထပ် battery နဲ့သုံးလို့ ရပါတယ် … original battery က တော့ 820 mAh ဆိုတော့ လိုင်းကောင်းတဲ့ နေရာတွေမှာ ၂ ရက်လောက် အသုံးခံပါတယ် … နှစ်ထပ် battery နဲ့ ဆိုရင်တော့ ၃ ရက်လောက် အသုံးခံပါတယ်
တစ်ခု အကြံပေးချင်တာကတော့ CDMA 450 နဲ့GSM နှစ်ကဒ် ပါတဲ့ဖုန်းတွေ(တရုတ် ဟန်းဆက်များ) ကတော့ အပျက်အများဆုံးပါပဲ ….
450 နဲ့Unimile PR650 သုံးမယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုနေမလဲ
unimile တွေ မသုံးစေချင် ဘူး ။ ဈေးကကြီး သေး ၊အပိုပစ်စည်း က လဲ ၀ယ် လို့ မရ ။power ic ပျက်ရင် ပြင်မရ ။
800MHz ကဒ်ကို ကမ်းရိုးတန်းမှာမိချင်ရင် ဘယ် Handset အမျိုးအစားက သင့်တော်လဲ သိချင်ပါတယ်။
n160 , Nico
အကောင်းဆုံးကတော့ ဘာမှ မကိုင်ကြပါနဲ့ .. ဟန်းဆက် တကားကားနဲ့ မျက်စိတော်တော်နောက်လို့ပါ…
အထူးသဖြင့် မိန်းမတွေပါပဲ… သနားပါတယ်.. သူတို့မှာ ဟန်းဆက်လေးရှိမှန်း သိအောင် အဲလောက်ကျပ်တဲ့ကားပေါ်မှာလဲ လက်မအားတဲ့ ကြားက ကိုင်ကိုင်ပြနေရတယ်… ကဲ ရှက်တတ်ရင် လဲသေလိုက်ကြပါနော့်… ဟား ဟား ဟား…….
(ကြုံတုန်းလေး ၀င်ကစ်ပေးတာနော်.. )
မဟုတ်ပါဘူး–ကြည့်ရာတာတော်တော်လေး မျက်စိ စပါးမွှေးစူး နေတယ်ထင်တယ်နော်။နားလည်ပေးပါရှင်။ခုမှဈေးပေါ လို့ ဝယ်သုံးနိုင်တာ။အရင်က ဖုန်းဆိုတာ နတ်သိကြားတွေလောက်ဘဲ ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြတာလေ—(နတ်သိကြား=ငွေပေါသူများ)